जीवन बीमा कम्पनीहरुका नारा कति आकर्षक ? कुन कम्पनीको नारा कस्तो ? – Insurance Khabar
जीवन बीमा कम्पनीहरुका नारा कति आकर्षक ? कुन कम्पनीको नारा कस्तो ?
प्रकाशित मिति : २९ कार्तिक २०७६, शुक्रबार १२:५८
काठमाडौँ । हाल नेपालमा १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । सञ्चालनमा रहेका जीवन बीमा कम्पनीहरुमध्ये १० वटा नयाँ जीवन बीमा कम्पनी रहेका छन् ।
बजारमा सञ्चालित यी जीवन बीमा कम्पनीहरुको विभिन्न खालका आ–आफ्नै नारा(स्लोगन)हरु रहेका छन् । ग्राहकको विश्वासमा व्यापार र समृद्धि हुने यी जीवन बीमा कम्पनीहरुको नारा कति आकर्षक छन् ? यी नाराहरु मार्फत नै कम्पनीहरुले आफुलाई प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् । कम्पनीले राखेका विभिन्न नाराहरुले कम्पनीलाई ग्राहक समक्ष चिनाउन सफल भएपनि उनीहरुको नाराहरु के कस्ता कुरामा केन्द्रीत छन् ?
सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित राष्ट्रिय बीमा कम्पनी “बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनिय नाम” नाराका साथमा अगाढि बढेको छ । जीवन बीमा कम्पनीको लिडर नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स ‘किनकि जीवन अमूल्य छ’ नाराका साथ अगाढि बढेको छ । त्यसको अर्थ जीवनको मूल्यसँग आफूलाई अघि बढाएको देखिएको छ । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स, ‘सबैको लागि सधैको लागि सुरक्षा’, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स ‘सुरक्षित भविष्य ’ नाराका साथमा हिँडेका छन् ।
यसैगरी, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको ‘सधै तपाईको साथ’, सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको ‘समृद्धि तपाईको साथ हाम्रो’, रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको ‘खुलेर जिऔँ’, रिलाबल नेपाल लाइफको ‘Reliable Forever‘, यूनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको ‘ जीवन अमूल्य छ सुरक्षित गर्नुहोस्’ नारा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स ‘Ensuring Future’ भन्ने नाराका साथ अगाढि बढेको छ । मेट लाइफ इन्स्योरेन्सले ‘तपाइसँगै जीवनमा अघि बढ्दै’ नामले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ । नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्सले ‘Forasecure future’ नाराका साथ बजारमा अघि बढ्को छ ।
जीवन बीमा कम्पनीहरु मध्ये सबैभन्दा कान्छो कम्पनी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स ‘आज पनि भोलि पनि, बचत पनि सुरक्षा पनि’ नामक नाराका साथमा बजारमा आएको छ । यस्तै, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले ‘सबैको लागि सधैको लागि सुरक्षा, शिक्षा र समृद्धि’, गुँरास लाइफ इन्स्योरेन्स ‘बाचुञ्जेल आफैलाई उपदान, भविष्यमा सन्ततीलाई वरदान’, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स ‘निश्चिन्त भवः’ नारालाई अघि सारेका छन् ।
त्यस्तै, लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन नेपाल ‘जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि’, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स ‘विश्वास, सुरक्षा, सम्वृद्धि’ र सूर्या लाईफ इन्स्योरेन्स ‘Your Future, Our Responsibility’ नामक नाराका साथमा बीमा बजारमा रहेका छन् ।
आईपीओ निष्कानको लागि आइएमई लाइफले दियो धितोपत्र बोर्डमा निवेदन
रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको साधारण सभा आइतवार
नेशनल लाइफको १० प्रतिशत संस्थापक शेयर सर्वसाधारण शेयरमा परिणत